औद्योगिक manipulators - उद्यम आधुनिकीकरण उपकरण।
माथि गत 30 वर्ष, संसारको अग्रणी औद्योगिक कम्पनीहरु को धेरै औद्योगिक वायवीय manipulators यसको उत्पादन को आधुनिकीकरण मा ठूलो ऐसे निवेश गरेको छ।
औद्योगिक manipulators - विशेष वायवीय उठाने सार्दा र विभिन्न cargoes को सटीक स्थिति को लागि प्रयोग प्रणाली। डिजाइन सामान सबै प्रकारका उठाउनु मात्र होइन, तर पनि ठाउँ तिनीहरूलाई निर्देशन गर्न, विभिन्न विमानहरु घुम्नेछन्, र न्यूनतम प्रयास संग अपरेटर अनुमति दिन्छ।
औद्योगिक manipulators अक्सर सवारीसाधान कारखानों पाउन सकिन्छ। आफ्नो मदत पाएर शरीर तत्व सेट, निलम्बन, साधन प्यानल, पाङ्ग्रा, ब्याट्री आदि धेरै अवस्थामा, मेशिन-निर्माण उद्यम मा manipulators प्रयोग सुरक्षा सुधार, कर्मचारीहरु को musculoskeletal सिस्टम को पेशागत रोग को जोखिम कम गर्न, औद्योगिक साइटहरूमा दक्षता वृद्धि कम्पनीहरु सक्षम बनाउँछ।
उत्पादन साइटहरु को Ergonomics तिर प्रवृत्ति उद्यम मा औद्योगिक manipulators को उपस्थिति मा एक महत्वपूर्ण प्रभाव थियो। साथै, संसारको प्रमुख अभियान श्रमिक मुआवजा, ढिलाइ र घाइते परिणामस्वरूप मुद्दा को लागत कम गर्न खोजिरहेका। छैन धेरै कारोबार यी समस्याहरू कुनै पनि बेवास्ता गर्न किन्न सक्छन्।
नियम, औद्योगिक manipulators धेरै संस्करणहरु उपलब्ध छन्: स्तम्भ, माउन्ट निलम्बित कार्यान्वयन र पनि अन्य प्रक्रिया उपकरण सम्मिलित। आवश्यक छ भने, उदाहरणका लागि, एक ठूलो काम क्षेत्र चल्ने manipulators बनाउन, कवर तिनीहरूलाई रेल ट्रयाक निलम्बित सेट गर्न।
एक विशिष्ट वायवीय manipulator को सञ्चालनको सिद्धान्त अपेक्षाकृत सरल छ। हुर्काउन र लोड lowering एक वा बढी सिलिन्डरहरु को परिणाम हो। तेर्सो आन्दोलन मा अपरेटर को पेशी शक्ति, छ "weightlessness एक राज्य।" कार्गो निलम्बन को अक्ष, साथै twists र अन्य अक्षहरूमा वरिपरि फ्लिप वरिपरि परिक्रमा अपरेटर को पेशी बल, साथै निर्मित gripper वायवीय actuators रूपमा गर्न सकिन्छ।
pnevmomanipulyatorov को मुख्य विशिष्ठ सुविधाहरू एक आफ्नो सुरक्षा छ। जब विफलता हुन्छ, एक ऊर्जा स्रोत (यस मामला मा हावा), को चल्ने लोड यसको मूल स्थिति कारण अवशिष्ट मात्रा फर्के सकिन्छ संकुचित हावा को, चोट र कारीगरी को संभावना समावेश जो ओराल्नको manipulator।
उच्च सटीक आन्दोलन र लोड को स्थिति भन्ने तथ्यलाई द्वारा हासिल छ र नियन्त्रण अपरेटर आफ्नै हात भने कार्गो र विवरण सार्न अनुमति दिने, को उठाने उपकरणहरूमा सीधा अवस्थित छ। यो यस्तो उपकरण प्रयोग को सजिलो द्वारा हासिल छ, संचालक विशेष प्रशिक्षण आवश्यक छैन।
औद्योगिक वायवीय manipulators धेरै विश्वसनीय छन्। चक्र लाखौं को वायवीय घटक स्रोत। समग्र प्रतिस्थापन - वायवीय तत्व को विफलता को मामला मा। मानक र सबै तत्व ठूलो-उत्पादित।
manipulators को संभावना विभिन्न क्षेत्रहरू प्रयोगको अनुमति दिन्छ। भारी भारी, नाजुक, खतरनाक र हानिकारक वस्तुहरू र भार सुरक्षित र चाँडै, सजिलै सारियो। सार्दा कार्गो नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्न कुनै पनि समय, विशेष गरी एक सीमित ठाउँ महत्त्वपूर्ण छ जसमा भण्डारण गरिएको छ। वायवीय घटक को प्रयोग यो सम्भव भएको विस्फोट र आगो अवस्था मा manipulators प्रयोग बनाउँछ जो, झिल्काहरू समाप्त।
विशेष प्रयोग उठाने उपकरणहरू एक विशेष कार्य को लागि गरे, चक्र समय कम र उत्पादन प्रक्रिया को व्यापार दक्षता को स्तर वृद्धि गर्न अनुमति दिन्छ। को छिटो जारी धेरै grippers प्रयोग विशिष्ट उत्पादन साइट मा कुनै पनि निर्माण प्रक्रिया र लचीलापन भिज्न लचीलापन प्रदान गर्दछ।
हाल, आधारभूत प्राविधिक सञ्चालन झन् महत्वपूर्ण भूमिका मा रूसी मिसिन-निर्माण उद्यम आधुनिक उपकरण र प्रविधिले प्ले। तर ancillary काम, सामान्यतया वा स्वयं अप्रचलित अदक्ष तंत्र को मद्दतले गरेको। सामान्य मा, काम समय शेष - आधारभूत सञ्चालनका कार्यान्वयन गर्न प्रत्यक्ष सम्बन्धित छैन, जबकि, केही अवस्थामा मात्र छैन मात्रा लिन्छ, तर अक्सर भारी मार्गदर्शन श्रम समावेश छ।
यो मेशिन परिचालक मुख्यतया लागू गर्ने बढते मा र लामो शाफ्ट र ड्रम, ओभरसाइजगरिएको flanges, डिस्क, डाली र वेल्डेड गोले, साथै मिसिन उपकरण (चक्र चक, मिसिन Vise, रोटरी टेबल रूपमा, विभाजन टाउको र अन्य यस्तै प्रदर्शनको मिसिन देखि dismounting गर्दा ) व्यापार कहिलेकाहीं आफूलाई धेरै शारीरिक तनाव पर्दाफास छ।
यस्तै अवस्था मिसिन विधानसभा स्टेशन र ठूलो आकारको एकाइहरु जहाँ भारी भागहरु वा विधानसभा एकाइहरु एक कडाई उन्मुख स्थिति दिइएको स्थिति स्थापित हुनुपर्छ मा उत्पन्न हुन्छ।
यी सबै अवस्थामा र धेरै अन्य विभिन्न कम्पनीहरु को पेशेवरों औद्योगिक वायवीय hoists, क्रेन, विकास र सेन्ट पीटर्सबर्ग कम्पनी "लोडर" मा निर्मित आउन सक्नुहुन्छ मदत गर्न। हाम्रो विशेषज्ञहरु विकास र वायवीय manipulators प्रयोग गरेर उत्पादन, उद्धार र manipulators र grippers स्थापना पूरा, साथै सबै आवश्यक प्रदान काम गर्ने क्षेत्रको संगठनको लागि सबै भन्दा राम्रो प्राविधिक समाधान प्रदान गर्नेछ डिजाइन दस्तावेज।
आफ्नो हातमा धातु लागि Guillotine
"ओम्स्क अस्टीच" (अस्टीच खेत, ओम्स्क): सञ्चालन, ठेगाना, भ्रमण को मोड
जहाँ सेप्टेम्बर मा आराम गर्न? यात्राहरु वा समुद्र?
मास्को क्षेत्र को केन्द्रीय रिङ रोड - वस्तु को लेआउट र सुविधाहरू
एलजी L5: कैरेक्टराइजेशन र प्रतिक्रिया। एलजी अप्टिमस L5 E612: सुविधाहरू, फोटो र आफ्नो फोन को विवरण